Ungazithola kanjani izithombe ezinde zokuvezwa nge-iPhone | Izindaba ze-IPhone
Ungazithola kanjani izithombe ezinde zokuvezwa nge-iPhone
URuben gallardo | | Okokufundisa namanyuwali
Ukuthi ikhamera yeselula isibe yisixazululo esisetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi ukuthatha izithombe noma yikuphi iqiniso. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yalesi sidingo, amandla wokuthwebula amafoni omakhalekhukhwini ahambile ku-crescendo. Noma mhlawumbe, le ngxenye ukuduma okuningi kufinyelelwe ekugcineni okuphezulu kwamatheminali.
I-iPhone ingenye yamakhompyutha anikeza amathuba amaningi lapho uthatha izithombe. Futhi nokuningi uma sine-iPhone 6S kuya phambili. Kungani? Yebo, ngoba ngale modeli sinikezwe indlela entsha yokuthatha izithombe ezinopopayi, ezaziwa nangokuthi "Izithombe Eziphilayo". Noma kunjalo, Ngokufika kwe-iOS 11 emakethe, lokhu kuthathwa kuthathe ukugqama kakhulu futhi kungezwa imiphumela emisha. Futhi enye yazo yilelo elibhekisa ekuvezweni okude. Kusukela manje ukuthola izifinyezo ezinomphumela wokuchayeka isikhathi eside kuzokwenzeka. Ake sibone ukuthi sikwenze kanjani.
1 Yiziphi izithombe zokuvezwa ezinde
2 Into yokuqala: ukusebenzisa inketho yezithombe ezibukhoma
3 Into yesibili: thola leso sithombe ku-Izithombe
4 Okwesithathu nokugcina: dlala isithombe bese usebenzisa isihlungi sokuveza isikhathi eside
Yiziphi izithombe zokuvezwa ezinde
Into yokuqala okufanele sikutshele yona ukuthi le ndlela kunzima ukuyifeza. Ngaphezu kwalokho, ukushaya isibhamu nakho kunento yako. Abasebenzisi abaphambili kakhulu ekuthatheni izithombe bazokwazi ngokuqinisekile ukuthi sikhuluma ngani. Kepha ukwenza isifinyezo esincane, uzokwazi ukuthi amakhamera wezithombe athatha izithombe ngenxa yezingxenye ezahlukahlukene zomshini wazo. Kepha ngokuyisisekelo le ndlela ukuthola lokho isivalo sekhamera sivaleka kancane uma sicindezela inkinobho yokushutha. Lokhu kuzokwenza konke okwenzekayo - ukuhamba njalo - kuthathwe ngomfanekiso owodwa. Ngakho-ke le miphumela ehlaba umxhwele.
Into yokuqala: ukusebenzisa inketho yezithombe ezibukhoma
Ukuze ufeze lo mphumela wokuchayeka isikhathi eside ku-iPhone, into yokuqala okufanele sibe nayo inketho yezithombe ezibukhoma iyasebenza; ngaphandle kwalokho ngeke kwenzeke ukunikeza isibhamu umphumela. Uzokubona lokho ngaphezulu kwe- uhlelo lokusebenza izithonjana ezahlukahlukene zivela ngaphansi kwe- "Ikhamera" ku-iPhone "Okuhlanu kuzocacisa."
Maphakathi nendawo phezulu uzobona isithonjana esinemibuthano ehlukile. Lokhu kuzoba phuzi ngophawu lwe-flash ngaphansi. Lokhu kuzokwenza izokhombisa ukuthi i-Live Photo mode iyasebenza. Manje kufanele nje ugxile bese ushaya isithombe. Ucabanga ukuthi kufanele kube nokunyakaza kulokho kubanjwa ukuze kuthi kamuva sibe nalo mphumela othathwe esithombeni; Ngamanye amagama, uma uthwebula i-landscape enazo zonke izinto ezimile, i-iPhone ngeke ikwazi ukufeza umphumela wokuchayeka isikhathi eside kulokhu kudutshulwa.
Manje, uma sithatha isithombe esikhomba umgwaqo onezimoto eziningi - ebusuku kuzoba mnandi kakhulu -, singathola ukuthwebula isikhathi eside ngemiphumela ethile emangalisayo. Kungakho isisekelo lapho umphumela we-iPhone usekelwe khona kufanele sibe sihle.
Into yesibili: thola leso sithombe ku-Izithombe
Uma sesithathiwe, kuzoba isikhathi sokuya kuhlelo lokusebenza lwe- "Izithombe" lwe-iPhone. Ngezansi sizoba nezinketho ezihlukile: izithombe, izinkumbulo, okwabiwe nama-albhamu. Esikuthandayo yile ndlela yokugcina. Ngaphakathi sizoba namafolda ahlukene futhi elilodwa lawo lizobizwa ngokuthi "Izithombe Eziphilayo".
Ngaphakathi kuzoba ukubanjwa - nabo bonke abanye - abathathiwe ngalo msebenzi osebenzayo. Qaphela, uma singathathanga ezinye izithombe eziningi ngemuva kwaleyo sithombe esisithandayo, futhi i- sizoyithola ngokushesha kunketho «Izithombe» kumenyu engezansi. Lapho sisivula, sizoba nesithombe kuqala.
Okwesithathu nokugcina: dlala isithombe bese usebenzisa isihlungi sokuveza isikhathi eside
Kusekude ukuba sizuze imiphumela esiyifunayo. Ngemuva kokuvula isithombe esibukhoma esisithandayo, sizobona ukuthi ngokucindezela ngokuqinile kuso, izinto zesithombe ziyaphila. Ngenkathi ucindezela isithombe, slayida umunwe wakho phezulu; imenyu entsha izovela phambi kwakho. Impela, imiphumela ongayisebenzisa kuleso Sithombe Esibukhoma. Futhi bayalandela: Phila, Buble, Bounce futhi Exposure Long.
Njengoba kungenzeka usuvele wacabanga, yikho lokhu okusithandayo. Ngemuva kokukhetha lowo mphumela, lokhu kuzosetshenziswa ngqo esithombeni Futhi, uma sishaye izisekelo, umphumela uzofanela ukwabiwa nabangane bakho nomndeni wakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungazithola kanjani izithombe ezinde zokuvezwa nge-iPhone
Ngiyabonga, bengingazi. Ngizozama kusasa.
Nakhu ukuthi umhumushi weSiri usebenza kanjani ku-iOS 11
Izinzwa ze-3D zizofinyelela kumatheminali e-Android ngonyaka ozayo